Madaxweynaha Suuriya oo digniin culus u diray reer Galbeedka. – Radio Daljir
Madaxweynaha Suuriya oo digniin culus u diray reer Galbeedka.
Dimishiq, Oct, 30 – Madaxweynaha dalka Suuriya Mr Bashaar Al-Assad ayaa ka digay faragelinta reer galbeedka ee dalkiisa , waxana uu sheegay in dhul-gariir iyo argagax xooggan laga dareemi doono guud ahaanba bariga dhexe, haddii aan wadankiisa laga daynin faragalinta qaawan ee reer galbeedku ka wadaan.
Mr Bishaar Al-Assad ayaa waraysi uu siiiyey wargeyska Sunday Telegraph waxaa uu ku sheegay in faragelin kasta oo ka timaada dhinaca wadamada reer galbeedka ay dhalindoonoto in Syria ay isubedesho ?Afghanistan kale ?.
Madaxweyne Bishaar Al-Assad ayaa qirtay in qaladaad badan ay sameeyeen ciidamadiisu amaanka marka la eego horaantii kacdoonka dalkaasi ka oogmay. Laakiin waxa uu sheegay in hadafku ahaa sidii ciidanku ay dajin-lahaayeen xiisadaha ay dalka Suuriya ka wadaan kuwo uu ugu yeeray qas-wadayaasha.
Hadalka madaxweyne Assad ayaa imanaya , iyadoo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey mr Ban Ki Moon uu jeediyey baaq ku aadan in dowladda dalka Suuriya ay gebi ahaan joojiso cadaadiska ka dhanka ah, mudaharaadayaasha isbedeldoonka ah ee dalka Suuriya.